Yahlulahlula i-2GB yePST yeFayile kwiifayile ezincinci-Isikhokelo samanyathelo ngenyathelo
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Yahlulahlulahlula i-2GB yeFayile yePST kwiifayile ezincinci
usebenzisa DataNumen Outlook Repair Ukwahlulahlula i-2GB yeFayile yePST kwiifayile ezincinci
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,592)
Qaphela: Ukuba une-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu ezifakiweyo, sicebisa ukuba usebenzise le ndlela ukufumana kwakhona ifayile yakho yePST engaphezulu koko. Ngaphandle koko, nceda usebenzise indlela kwesi sikhokelo.
Xa udibana Ifayile ye-PST engaphezulu kakhulu (Ifayile yePST ilingana nayo okanye inkulu kune-2GB) kwaye awunakho ukufikelela ngempumelelo kwiMicrosoft Outlook 2002 okanye iinguqulelo ezisezantsi, onokuzisebenzisa DataNumen Outlook Repair Ukwahlulahlula kwiifayile ezincinci ukuze zingaphantsi kwe-2GB, ezizimeleyo enye kwenye, kwaye zinokufikelelwa ngokwahlukeneyo yi-Outlook 2002 okanye iinguqulelo zangaphambili ngempumelelo.
Phawula: Phambi kokwahlulahlula-hlula ifayile yePST nge DataNumen Outlook RepairNceda uvale iMicrosoft Outlook kunye nezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile yePST.
yiya isithuba, emva koko ukhethe olu khetho lulandelayo:
kwaye usete umda wobungakanani kwixabiso elingaphantsi kwe-2GB. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ixabiso eliliqhezu nje le-2GB ukuze ifayile yakho ingafiki kwi-2GB kwakhona kungekudala, umzekelo, i-1000MB. Nceda uqaphele ukuba iyunithi yi-MB.
Buyela emuva ithebhu.
Khetha ifayile engaphezulu kwe-Outlook PST njengomthombo wePST oza kulungiswa:
Ungafaka igama lefayile yePST ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana ifayile ye-PST ezakucutshungulwa kwikhompyuter yalapha.
Njengoko ifayile ye-PST ingaphezulu, kufuneka ikwifomathi ye-Outlook 97-2002. Ke ngoko, nceda ucacise ifomathi yefayile yayo kwi "Outlook 97-2002" kwibhokisi ye combo ecaleni kwebhokisi yokuhlela ifayile. Ukuba ushiya ifomathi njengo "Ukuzimisela ngokuzenzekelayo", emva koko DataNumen Outlook Repair izakuskena ifayile yePST engaphezulu komthombo ukumisela ifomathi yayo ngokuzenzekelayo. Nangona kunjalo, oku kuya kuthatha ixesha elongezelelweyo.
Ngokuzenzekelayo, nini DataNumen Outlook Repair iskena kwaye yahlule umthombo ogqithisileyo kwifayile kwizinto ezincinci ezincinci, eyokuqala yahlulahlulwe ifayile ebizwa ngokuba yi-xxxx_fixed.pst, eyesibini ngu-xxxx_fixed_1.pst, eyesithathu ngu-xxxx_fixed_2.pst, njalo-njalo, apho i-xxxx ligama le Ifayile yePST yomthombo. Umzekelo, kwifayile yePST yemvelaphi ye-Outlook.pst, ngokungagqibekanga, ifayile yokuqala eyahluliweyo iya kuba yi-Outlook_fixed.pst, kwaye eyesibini iya kuba yi-Outlook_fixed_1.pst, kwaye eyesithathu iya kuba yi-Outlook_fixed_2.pst, njl.
Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ungafaka igama lefayile esisigxina ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kunye nokukhetha igama lefayile eliqingqiweyo.
Unokukhetha ifomathi yefayile yePST emiselweyo kwibhokisi yokudibanisa ecaleni kwebhokisi yokuhlela yefayile emiselweyo, iifomathi ezinokubakho zi-Outlook 97-2002 kunye ne-Outlook 2003-2010. Ukuba ushiya ifomathi njengo "Ukuzimisela okuzenzekelayo", emva koko DataNumen Outlook Repair iya kuvelisa ifayile ye-PST emiselweyo ehambelana ne-Outlook efakwe kwikhompyuter yendawo.
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Outlook Repair Ndiza start ukuskena ifayile yePST yomthombo, ukufumana kwakhona nokuqokelela izinto kuyo, kwaye emva koko ubeke ezi zinto zifunyenweyo kwifayile entsha ye-PST egama lalo lisetelwe kwiNyathelo 6. Siza kusebenzisa i-Outlook_fixed.pst njengomzekelo.
Xa ubungakanani be-Outlook_fixed.pst bufikelela kumda osethwe kwangaphambili kwiNyathelo 2, DataNumen Outlook Repair izakwenza ifayile yesibini yesibini ye-PST ebizwa ngokuba yi-Outlook_fixed_1.pst, kwaye uzame ukubeka izinto ezishiyekileyo kule fayile.
Xa ifayile yesibini ifikelela kumda osetiweyo, DataNumen Outlook Repair izakwenza ifayile yesithathu yePST ebizwa ngokuba yi-Outlook_fixed_2.pst ukulungiselela izinto ezishiyekileyo, njalo njalo.
Kwinkqubo, ibha yenkqubela phambili
iya kuqhubeka ngokufanelekileyo ukubonisa inkqubela yokwahlulahlula.
Emva kwenkqubo, ukuba ifayili yePST engaphezulu komthombo yahlulwe yaziifayile zePST ezininzi ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo ngolu hlobo:
Ngoku ungavula iifayile ze-PST ezahluliweyo nganye nganye ngeMicrosoft Outlook. Kwaye uya kufumana zonke izinto zefayile yePST yoqobo olukhulu zisasazekile phakathi kwezi fayile zahluliweyo.
Phawula: Inguqulelo yedemo iya kubonisa ibhokisi yomyalezo elandelayo ukubonisa impumelelo yokwahlukana:
Kwiifayile ezintsha ze-PST ezahluliweyo, imixholo yemiyalezo kunye nezifakelo ziya kutshintshwa zinolwazi lwedemo. Ndiyacela odola ingxelo epheleleyo ukufumana imixholo eyiyo.
Yahlulahlulahlula i-2GB yeFayile yePST kwiifayile ezincinci